Debian 9 inopinda muchikamu chechando | Linux Vakapindwa muropa
Debian 9 inopinda chando chikamu
Musi waNovember 5, zvakaziviswa kuti ramangwana uye rinotarisirwa Debian 9 ratopinda muchikamu chemahara, chikamu chinova pre-kuvhura yakagadzikana chikamu chekushandisa, iyo isina zuva parizvino.
Chikamu chechando chikamu chinononoka, mune ese mapakeji ari mukuparadzira ari "chando", ndiko kuti, hapana imwe shanduko inobvumidzwa kwavari kunze kwekunge yagadziriswa kugadzirisa zvakakomba zvikanganiso.
Chikamu chakatanga zuva rekupedzisira 5 uye Ichawedzerwa kusvika Kukadzi 5, umo Debian 9 ichave yakazara chando. Ichi chikamu zvakare chakakamurwa kuita dzakasiyana shanduko, umo vanogadzira mapakeji vanokumbirwa kuti mapakeji avo apedzisire.
Ichi chikamu zvakakosha zvikuru kukudziridza anoshanda system, nekuti inobvumidza kumwe kutonga pamusoro pemapakeji ari kuzoiswa. Sezvo chirongwa chekushandisa chiine akawanda mapakeji ane chekuita neumwe, kugadzirisa imwe yacho kunogona kukanganisa mashandiro ekuparadzira kwese uye kumanikidza shanduko kune ese mapakeji.
Neichi chikonzero, iri "chando" kuitira kuti mapakeji ese agone kuyedzwa uye kuongororwa kugadzikana nekukurumidza sezvazvinogona. Sezvo shanduko dzisingatenderwe kunze kwekuda kwekumanikidza majeure, iro chete basa iro iro rinotarisirwa nevamiriri vebudiriro richafanira kuita kutarisa kuti zvese zviri kufamba mushe.
Kana zvichinge zvasimbiswa kuti zvese zviri kufamba mushe uye izvo hapana shanduko yekuchengetedza inoitwa, kugovera kunobuda senge yakagadzikana vhezheni. Panyaya yaDebian 9, parizvino hatina zuva rakatarwa, asi ini ndinofungidzira kuti ichaburitswa zvingangodaro zvemazuva ezhizha.
Izvo kana, kunyangwe isu tisingazive yakatarwa zuva tichave tichifukidza Debian 9 nhau nguva dzosekana, saka kana chimwe chinhu chichizivikanwa iwe uchave wekutanga kuziva senguva dzose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Debian 9 inopinda chando chikamu
Ini ndinoda Debian. Zvinokurumidza zvinoshamisa !! Mune ine mwero Notebook iyo yakashanda zvakatsetseka neGnome uye kwete kunyangwe ne xfce. Chaizvoizvo kugovera kwakanaka. Yakagadzikana uye yakasimba. Iyo distro kuve nayo zvachose pakombuta uye kukanganwa nezvayo.
Kurara matanhatu akadaro
AZPE iwe unogona kundiudza iyo XFCE uye MATE desktop shanduro Debian 9 ichaunza uye ndeipi kernel iyo yaunoshandisa. Imwe webhusaiti kuziva zvishoma nezveDebian 9 uye nhau dzayo. Ndatenda.
Pindura kuna Nap Sixsix
Ndiri kumirira nemwoyo wese kusunungurwa kwaDebian 9. Kusunungurwa uku kuchave riini?
Plasma Mobile, imwe yemahara imwe yenzvimbo dzedu dzinofamba?